Ripu DVD gị na MP4 ọsọ ọsọ na WinX DVD Ripper | Akụkọ akụrụngwa
Ripị DVD gị na MP4 ọsọ ọsọ na WinX DVD Ripper
Ignacio Sala | | Aplicaciones, Foto na ụda
Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe igwefoto dijitalụ bụ usoro eji ede vidiyo, ọ bụghị ekwentị dị ka ọ dị taa, ọtụtụ n'ime anyị mechara na-ebufe vidiyo ndị edere na DVD iji mee ka ha dịkwuo ogologo ma nwee ike igwu ya n'ebe ọ bụla.
Agbanyeghị, dị ka kamera dijitalụ, maka ịdekọ vidiyo na iji foto, na-apụ n'anya maka smartphones, ọtụtụ bụ ndị ọrụ na-aga n'ihu na tọghata gị E na DVD ha na-echekwa ya naanị na draịvụ ike ha ma ọ bụ ọrụ nchekwa igwe ojii.
Ọ bụrụ n'inwee ntutu isi awọ ole na ole, ma ọ bụ nọ na usoro ahụ, ọ ga-abụ na ị bụghị naanị nchịkọta DVD nkiri, mana ị ga-enwekwa vidiyo vidio ochie na usoro DVD, vidiyo ahụ ị na-achọ inwe mgbe niile iji nyochaa ha na-enweghị iji DVD agụ, a ngwaọrụ na, n'ihi na a afọ ole na ole, e weere ihe nke Pasado.
N'adịghị ka vinyl, Ọkpụkpọ nke ahapụbeghị anyị kpamkpam Tụkwasị na nke a, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ laghachiri inwe onye ntorobịa nke abụọ, usoro DVD ga-apụ n'anya, ya mere a na-atụ aro ya ka anyị bido nyefee vidiyo anyị na usoro a gaa na usoro dijitalụ.
Otu n'ime ngwa kachasị mma dị ugbu a na ahịa maka tọghata DVD ka MP4 ma ọ bụ ISO oyiyi es WinX DVD Ripper. E nwere ngwa ndị ọzọ na-arụkwa ụdị ntụgharị a, mana ntụgharị nke a na-enye anyị agaghị ahụ na nke ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ihe niile ngwa a na-enye anyị, a na m akpọ gị oku ka ị gụọ agụ.
1 Nweta ikike n'efu
2 Kedu ihe kpatara anyị ji atụgharị DVD anyị na MP4 ma ọ bụ onyoyo
2.1 Ndabere iji chekwaa ebe ọ bụla
2.2 Tọghata DVD ka MP4
2.3 Detuo DVD gị na USB
2.4 Gwuo DVD gị site na Plex na Kodi
3 Ihe kpatara WinX DVD Ripper bụ nhọrọ kachasị mma iji mepụta mbipụta DVD anyị
3.1 Mee DVD nke DVD ọ bụla
3.2 Nhata yiri ka usoro ISO
3.3 Kasị niile
4 WinX DVD Ripper, ngwa kachasị vasatail
5 Olee otú iji tọghata DVD ka MP4 / ISO na WinX DVD Ripper
Nweta ikike n'efu
Los chicos de WinX DVD Ripper na-enye ikikere 500 ụbọchị ọ bụla, ikikere nke ahụ kwe ka anyị jiri rụọ ọrụ ọ bụla nke ngwa ahụ. Naanị ma ọ bụ na ụdị a agaghị enweta mmelite ọhụrụ.
Kedu ihe kpatara anyị ji atụgharị DVD anyị na MP4 ma ọ bụ onyoyo
Ndabere iji chekwaa ebe ọ bụla
Ọ na-esiwanye ike chọta DVD na-echekwa ma ka afọ na-aga, ọ ga-esiwanye ike kamakwa usoro ọgụgụ nke usoro a amalitewokwa ịbụ ezigbo ụkọ. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, usoro anụ ahụ na-adị mfe mbibi, nke na - ebute oke enweghị ọdịnaya nke ọdịnaya.
Gbanwee ọdịnaya anyị na usoro dijitalụ na-enye anyị ohere ịnwe ya mgbe niile ma nwee ọtụtụ akwụkwọ ndabere nke otu ọdịnaya (ọkachasị vidio ezinụlọ ochie). The vidiyo na dijitalụ usoro, anyị nwere ike na-echekwa ha na ihe ọ bụla ike mbanye, USB osisi ịkọrọ ya, nchekwa ọrụ, NAS ... a mma na ị na-adịghị enwe ugbu a na gị nchịkọta nke ezinụlọ fim na vidiyo.
Tọghata DVD ka MP4
WinX DVD Ripper na-enye anyị ohere ịgbanwe DVD anyị na usoro MP4, Ọkpụkpọ dakọtara na ngwaọrụ elektrọnik niile dị ugbu a n'ahịa, site na smartphones ka kọmputa yana consoles nke ọgbọ ọ bụla.
Detuo DVD gị na USB
Inwe DVD na telivishọn anyị bụ usoro dị mfe na-enweghị DVD draịva ejikọrọ, ebe ọ bụ na WinX DVD Ripper ekele, anyị nwere ike kpọọ tọghatara faịlụ ọ bụla usoro si USB njikọ nke igwe onyonyo anyị.
WinX DVD Ripper na-enye anyị ohere ịgbanwe DVD n’ihe ọ bụla anyị chọrọ. Ọ dịghị mkpa ịmara ụdị usoro ngwaọrụ ahụ na-akwado Ebe njedebe, ebe ọ bụ na ngwa ahụ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ nke na-eduzi anyị nzọụkwụ site na iji mezuo usoro ahụ.
Gwuo DVD gị site na Plex na Kodi
Otu uru dị n'inwe ọba akwụkwọ anyị n'ụdị dijitalụ na-enye anyị bụ na anyị nwere ike ịnwe ya oge niile, site na NAS ma ọ bụ ozugbo na draịvụ ike anyị ka, site na Plex ma ọ bụ Kodi, anyị nwere ike kpọọ ọdịnaya na ngwaọrụ ọ bụla na ngwa ndị a, ọbụlagodi na ha anọghị n'otu netwọk Wi-Fi.
Ihe kpatara WinX DVD Ripper bụ nhọrọ kachasị mma iji mepụta mbipụta DVD anyị
Na mbụ, ekwuola m na ngwọta anyị nwere n'aka anyị WinX DVD Ripper bụ nke kachasị mma ugbu a n'ahịa ma ekpughere m ihe dị iche iche. Ma Gịnị mere o ji bụrụ nke kachasị mma?
Mee DVD nke DVD ọ bụla
WinX DVD dakọtara na DVD niile dị n’ahịa, gụnyere nsonaazụ kachasị ọhụrụ na mpaghara ọ bụla, kamakwa, ọ na-enyekwa anyị ohere iweghachite DVD mebiri emebi na ndị nwere njehie ọgụgụ.
Nhata yiri ka usoro ISO
Ọ bụrụ n’ịchọghị ịtụgharị DVD ka MP4 ka usoro MPXNUMX, iji WinX DVD Ripper ị ga - eme ụdị oyiri na usoro ISO ka mgbe niile nwere ihe mgbakwunye DVD dị n'aka na ọ bụghị naanị ihe nkiri. The oyiri na ISO format bụ otu ihe ahụ na anyị nwere ike ịhụ na anụ ahụ DVD, na-enweghị ọnwụ mma.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ nke na-enye anyị ohere ịgbanwe DVD anyị na usoro dijitalụ, WinX DVD Ripper na-eji eserese nke ngwaọrụ anyị ka ọ bụrụ usoro a dị oke ọsọ (ruo 47% ngwa ngwa karịa ngwa ndị ọzọ) na-enweghị idafu n'oge ọ bụla.
WinX DVD Ripper, ngwa kachasị vasatail
WinX DVD Ripper bụ ngwa ọrụ magburu onwe ya iji gbanwee ọbá akwụkwọ anyị n'ụdị DVD ka usoro dijitalụ, ma MP4, HEVC, MPG, WMV, AVC, AVI, MOV ...
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere dezie DVD na anyị na-atụgharị ka bugharia ihe oyiyi, akuku ya, tinye ndepụta okwu, gbanwee agba parameters ...
Kpoo DVD anyị kachasị amasị anyị igwu egwu na iPhone, iPad, Xbox, PS4… Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na mfe na WinX DVD Ripper.
Olee otú iji tọghata DVD ka MP4 / ISO na WinX DVD Ripper
Usoro iji tọghata DVD ka MP4 ma ọ bụ usoro ISO dị mfe nke na ọ dị ka ihe ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro nke ịtụgharị DVD anyị nchịkọta na usoro dijitalụ, mgbe ahụ, m ga-egosi gị ihe ị ga-eso ya mere ị pụrụ ịhụ ka ọ dị mfe.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ itinye DVD ka ọ ghọọ onye na - agụ ihe na kọmputa anyị. Ngwa ahụ na-akpaghị aka ga-eburu ọdịnaya diski ahụ na anyị niile ngbanwe nhọrọ ọ na-enye anyị.
Ọzọ, anyị ga-ahọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ mee nkwado ndabere na usoro ISO nke DVD (DVD Ndabere) ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ tọghata ya na usoro dakọtara na Apple, Android, Xbox, PlayStarion ngwaọrụ. Ozugbo anyị ahọpụtara usoro anyị chọrọ iji tọghata DVD, pịa RUN ma chere ka usoro a kwụsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Ripị DVD gị na MP4 ọsọ ọsọ na WinX DVD Ripper
SPC Gravity Octacore, akụ na ụba mbadamba na 4G [Analysis]